काठमाडौँ । प्रगतिशील लेखक सङ्घ काठमाडौँले २०७५ जेष्ठ २३ गते “विद्यालयमा कविता” शङ्खला अन्तर्गत “आशु कविता लेखन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम” सम्पन्न गरेको छ । राजधानीको नयाँ बानेश्वरस्थित पाठशाला नेपालमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
प्रलेसका केन्द्रीय अध्यक्ष मातृका पोखरेलको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा साहित्यकार डा. राम प्रसाद ज्ञवाली, डा. देवी नेपाल, जयन्ता पोखरेल, नारायण निरासी लगायतको पनि आतिथ्यता रहेको थियोे । दुई दर्जनभन्दा बढी विद्यालयका विद्यार्थीहरुको सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रममा कविताका बारेमा डा. देवी नेपालले प्रशिक्षण दिनु भएको थियो ।
प्रशिक्षणपछि “आशु कविता लेखन तथा वाचन प्रतियोगिता” को कार्यक्रम अगाडि बढेको थियोे । “मेरो सपना” शीर्षक दिइएको उक्त कार्यक्रममा कविता लेख्नका लागि विद्यार्थीहरुलाई ४० मिनट समय दिइएको थियो । निर्धारित समयभित्रै लेखिएका कविताहरुको मूल्याङ्कन गर्नका लागि साहित्यकारहरु नारायण निरासी र जयन्ता पोख्रेल सहितको निर्णायक मण्डल गठन गरिएको थियो । निर्णायक मण्डलले दिएको अङ्कका आधारमा सो प्रतियोगितामा प्रथम स्थान एम्बिसन स्कुलकी अनुज्ञा नेपालले, द्वितीय स्थान प्रारम्भ एकेडेमीकी दिव्या गौतमले, तृतीय स्थान पायनियर एकेडेमीकी स्नेहा दाहालले र सान्त्वना पुरष्कार रिडर्स इन्टरनेसनल मोडेल स्कुलकी युरिका खातीले प्राप्त गरेका थिए । विजयी स्कुलका विद्यार्थीहरुलाई कार्यक्रममै प्रथमलाई दुई हजार, द्वितीयलाई एक हजार पाँच सय, तृतीयलाई एक हजार र सान्त्वनालाई पाँच सय नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो ।
प्रलेस काठमाडौँका अध्यक्ष बालमुकुन्द कार्कीको अध्यक्षता तथा सचिव भीम क्षेत्रीको सञ्चालनमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा मुक्तान थेवा, कौसिला रिसाल, धर्म पोखरेल, डा. राम प्रसाद ज्ञवाली र नारायण निरासीले कविता वाचन पनि गर्नु भएको थियोे ।